Apple TV 3 hadda wixii ka dambeeya lama jaan qaadi karo HomeKit | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay si aamusnaan ah uga saartay taageerada HomeKit jiilka saddexaad ee Apple TV.
Tan macnaheedu waa in lIsticmaalayaasha u cusbooneysiinaya iPhone-ga iyo iPad-ka illaa iOS 10 ma awoodi doonaan inay adeegsadaan aaladda marinka fog ee barnaamijka Guriga illaa ay leeyihiin jiilka XNUMXaad ee Apple TV.
Apple TV 3 isticmaaleyaashu mar dambe ma awoodi doonaan inay adeegsadaan Guriga
Tan iyo markii lagu dhawaaqay 'HomeKit' sanadkii 2014, milkiilayaasha aaladaha macruufka ee ku shaqeeya iOS 8.1 ama ka dib waxay awoodeen inay la xiriiraan jiilka saddexaad ee Apple TV iyaga oo adeegsanaya marinka fog ee iCloud, kaas oo u oggolaanaya sanduuqa ugu sarreeya inuu amarro ku gudbiyo qalabka 'HomeKit' marka adeegsadaha ka fog guriga.
Si kastaba ha noqotee, Apple waxay ku xaqiijisay barteeda taageerada Twitter-ka in mar haddii isticmaaleyaashu cusbooneysiiyaan qalabkooda iOS 10, kaliya jiilka afraad ee Apple TV ama ka dib ay awoodi doonaan inay u dhaqmaan sidii xarun HomeKit ah oo loo adeegsado bilawga. leh qalab ku xiran. Apple sidoo kale waxay cusbooneysiisay dukumiintiga taageerada fog ee HomeKit si ay uga tarjunto isbedelkan lama filaanka ah.
Milkiilayaasha jiilka saddexaad ee Apple TV ee adeegsada muuqaalkan hubaal ma jeclaan doonaan wararka. Waxaa cad in Apple waxay rabtaa inay kobciso iibinta Apple TV 4, laakiin qaabkan "loogu qasbayo" dadka isticmaala inay iibsadaan qalab cusub gabi ahaanba, maahan sax. Xitaa intaa ka sii badan marka la sameeyo iyada oo aan la helin ogeysiis hore.
Sidaa darteed, hadda Apple TV 4 markay la socoto muuqaal kale oo gaar ah, oo ah inuu awood u yeesho inuu noqdo xarunta guriga caqliga ka ah barnaamijka Guriga ee iOS 10.
Dhinaca kale, waxay u muuqataa in shirkaddu sidoo kale isku dayeyso inay ka saarto wixii raad ah ee qalabkan yaalla bakhaaradeeda. Apple TV 3 miyuu hawlgab ka noqon doonaa dhawaan?
Talaadada, Apple wuxuu sii daayay tvOS 10 jiilka afaraad ee Apple TV, isagoo ku daraya taageerada maareynta qalabka iyadoo la adeegsanayo Siri ilaa HomeKit, awooda lagu xakameynayo HomeKit iyadoo la adeegsanayo codsiyo dhinac saddexaad ah, iyo qaabab badan oo cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Apple TV 3 ma sii wado taageerida HomeKit
Adkaysiga iPhone 7 ayaa la tijaabiyay, maxuu noqon doonaa natiijada?